Izinqola Zezinqola - Abakhiqizi Base China Nezinikezeli
Inqola yensimu egudlukayo yeSunnydaze enesibambo sokuqondisa esandekayo, isihlalo esijikayo, ubhasikidi nethileyi.
Ngezimpelasonto sonke siyathanda ukulungisa ingadi yethu. Kepha uma ulungisa utshani, ngeke ukhathale yini uma uqhubeka nokuzihlaxa nokusebenza? Inqola engadini engifuna ukuyethula kuwe ngezansi ingaxazulula inkinga yokukuqedela umsebenzi futhi ikwenze ukhululeke emsebenzini.
I-ABCTOOLS Isitoreji Esihlala Njalo Sokulondolozwa Kwenqola Yokusonga Ibhishi Wagon
Inqola yokusonga eyenziwe ngohlaka lwensimbi, indwangu ye-oxford engu-600D namasondo e-PVC noma e-PU. Usayizi wayo wonke ungu-104 × 53 × 117cm, usayizi ogoqiwe ngu-53 × 13 × 67cm Kuyisicelo sokuthenga, ukukhempa, ukudlala olwandle.
3 Isigaxa Isitoreji Inqola Yeselula 4 Amasondo Racking For Household
I-C1714S3 inqola yesigaba esithathu, usayizi wayo (L * D * H) ingama-43 * 36 * 88cm, enziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme, esebenzisa ubuchwepheshe obuhle kakhulu bokufafaza impuphu, ubukhulu bento ngu-0.4-0.7mm, usayizi webhubhu ingu-22 * 0.7mm no-22 * 0.5mm.
Amashalofu Ekhaya Amayunithi Wokugcina Amasheya Okuhweba Ishelufu Yesitoreji Esincane Amayunithi Wokushefa Amakamelo Okulala Indawo Yokubeka Amashelufa I-White Storage Shelf Unit